မိတ်ကပ်ကြောင့် အရေပြား မပျက်စီးဖို့ဆိုရင် . . . – Good Health Journal
မိတ်ကပ်ကြောင့် အရေပြား မပျက်စီးဖို့ဆိုရင် . . .
မိတ်ကပ်တွေနေ့တိုင်းလိမ်းလို့ မျက်နှာအရေပြားပျက်စီးမှာ စိုးရိမ် မိနေပါလား၊ တကယ်လို့ သင့်အရေပြား က အထိမခံတဲ့ Sensitive Type မျိုး၊ အလာဂျီအလွယ်တကူ ထတတ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ ပိုဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေပြားပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေ လား ဆိုတာကို လေ့လာထားတဲ့ သုတေ သနတွေတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိတ်ကပ်ကို နှစ်သက်တဲ့ ပျိုမေတို့ မျက် နှာအရေပြား မထိခိုက်စေဖို့ ဒီအချက်တွေ ကို သတိရလိုက်ပါ။
မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ အရေပြားပျက်စီး တာမဟုတ်ပါဘူး၊ မိတ်ကပ်မှာပါတဲ့ ပါဝင် ပစ္စည်းတွေကသာ အရေပြားပေါ် သက် ရောက်မှု ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးကို ဦးစားပေး ရွေး ချယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် မိတ်ကပ် ဖောင် ဒေးရှင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်နဲ့ မိတ် ကပ်ဖျက်ဆေးတွေကို အရည်အသွေး ကောင်းတာလေးတွေ သတိထားပြီး ရွေး ချယ် ဝယ်ယူပါ။
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ ဖော့တုံးတွေကို သုံးပြီးတိုင်းဆေးကြောပေးပြီး မိတ်ကပ် လိမ်းတဲ့ ဘရပ်ရ်ှတွေကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ခါ၊ နှစ်ပတ်တစ်ခါ သန့်စင် ပေးရပါမယ်။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း မိတ်ကပ် ဖျက်ဆေးရည်ကိုသုံးပြီး မိတ်ကပ်တွေကို အရင် သန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးနောက် မျက် နှာသစ်ဆေးနဲ့ ထပ်သစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွာလတီဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ မိတ် ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ညဘက်မှာ မသန့်စင်ဘဲ အိပ်ရာဝင်မယ်ဆိုရင် မျက်နှာအရေပြား ပျက်စီးစေပါတယ်။
(၅) သင့်အရေပြားအခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါ
ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့ အသားအရေ မျိုးဆိုရင် တချို့ ဘီဘီနဲ့ စီစီ ခရင်မ်တွေ နဲ့ မတည့်တတ်ပါဘူး။ တချို့အမှတ်တံ ဆိပ်တွေက Sensitive Skin Type ရှိသူတွေမှာလည်း မတည့်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ မိတ်ကပ်အသစ်ပြောင်း လိမ်းဖို့ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် Tester အရင်စမ်းကြည့်ပါ။ သင်နဲ့ တည့်မတည့် စမ်းဖို့ အနည်းငယ်လိမ်းပြီး နာရီအတော် ကြာကြာနေကြည့်ပါ။ တည့်တယ်ဆိုမှ နောက်နေ့မှာ ပြန်သွားဝယ်ပါ။ ဓာတ်မ တည့်တာတစ်ခုခုကြောင့် ရောင်ရမ်းတာ၊ ဝက်ခြံထွက်တာဖြစ်ရင်တော့ မျက်နှာပေါ် ဘာမိတ်ကပ်မှ မလိမ်းဘဲ ရက်အနည်း ငယ် အနားပေးလိုက်ပါ။
Categories:	Beauty	/ No Responses / by Good Health Journal February 13, 2019